Iindaba - Intshayelelo emfutshane kwiPVC anti-static floor
Umgangatho wePVC anti-static kufuneka wenziwe ngentlaka yePVC njengento kwaye yenziwe yinkqubo yokubumba eyodwa ye-extrusion.Izinto ze-PVC zivelisa umbane ongatshintshiyo phakathi kwamaphepha kwaye zinefuthe elide lokuchasana ne-static.
Kukho ibhalansi yeentlawulo ezilungileyo kunye nezibi emzimbeni womntu, kwaye xa uhambisa okanye ubangela ukungqubuzana, kuya kukhokelela kukungalingani kweentlawulo ezilungileyo nezibi.Xa ubamba ibhloko yokumisa, ikhupha ngokukhawuleza intlawulo yombane, ibangela umbane omileyo.Ukuze kuthintelwe olu hlobo imeko ekruqulayo yombane ngesiquphe, kuyimfuneko ukusebenzisa umgangatho anti-static.
Umgangatho we-Antistatic wahlulwe kwithayile yomgangatho we-static static kunye nethayile yomgangatho oqhubayo we-static ngokwemisebenzi eyahlukeneyo.
Kubomi bemihla ngemihla, abantu bahlala bevakalelwa kukuba bangumbane ngokukhawuleza okwethutyana.Lo mbane ungashukumiyo ufihlakeleyo awunako ukwenzakalisa ngokulula kumzimba womntu, kodwa uya kubangela umonakalo omkhulu kumashishini amaninzi.Ngokomzekelo, ekuveliseni i-micro-electrical components, okanye ukusetyenziswa kwezixhobo zokulinganisa ezibukhali kakhulu, i-thermal conductivity ye-tile yomgangatho ibonakala ibalulekile.I-tile yomgangatho we-static iya kukhokela intlawulo ye-static yomzimba womntu emhlabeni ngokweebhutsi, ukwenzela ukuba intlawulo i-static, kwaye emva koko ithintele umbane ongatshintshiyo.
Ziziphi iimpawu zomgangatho we-PVC anti-static?
I-1, ukubonakala kufana nelitye, kunye nesiphumo esihle sokuhlobisa, kunye neprojekthi yokuhlobisa ilungele.
I-2, i-thermal conductive organic matter yi-carbon black ezinzileyo, i-intanethi ye-thermal conductive ukusuka kumaleko aphezulu adityaniswe ngokuthe ngqo kumaleko asezantsi, olu hlobo lwesakhiwo lwenza iipropati zexesha elide ze-antistatic;
I-3, ipleyiti yokuqina kwePVC yeplastiki enesiqingatha-phezulu, eneempawu zokunganyangeki, ukuxhathisa umhlwa, akukho ukuvutha kunye nokuxhathisa;